Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): April 2012
Sadung Jinghpaw Wunpawng Hpyenyen NiaKraw Madai Nsen (video)
at 4/30/2012 11:53:00 PM
Click video More+++Full
Karai garum ai
De, Myitrum manang ni, Anhte lusha gam akyu hpyi shagu,KK kaw hkrang lung wa ai hku re. Mahtai kaja grai lu ai; chyeju shakawn ga nga, masha kaba ni tsun shana ma ai. Yahte Shanglawt Tsing ni Kahkyin Gumdin Ga shagawp gawp shapoi bu ai ten hta, ang sha-a, Shanglam de na Tai ni BGF mungshawa WP hpyenla ni hte shada n kam n tsen hkat nna, maja hkat ai majaw, yup n pyaw sha n mu rai nga ma ai da. KK anhteamatu bungli galaw ai gaw ding-yang rai nga na re ngu, kam sham let, JIC+++read more
Sinat ngoi ai shana
at 4/27/2012 07:15:00 AM
Tsawra ai myit rum manang ni,
Tai ni gaw n shayawm,n htingnut,n jahkring re ai ladat hte Ginjaw hpe sharu shatsang nga sai.Anhte hpe mungkan myi hte yu kaji dik nga ma ai.Aten galu sai re majaw hkam jan lu na n rai sai ngu shadu nga ma ai.Laizaekyu hpyi atsam bai sharawt sai.26.4.2012-27.4.2012 (5:00PM to 5:00PM )hkying hkum 24 akyu bai hpyi nga ai.Du ai shara kaw na myit dum nga mi oi.
JIC+++Read More++click on
Sinat ngoi ai shana laiza
Karaiamatu
at 4/26/2012 10:12:00 AM
Majan aten galu mat wa ai hte maren,law la ai bungli ni galaw jin wa sai she shadu shajang sai hpe mu na lu ai majaw, "Karai A Matu" ngu ai Ga shagawp gawp dat sai. Grai hki ba nga sai Shawnglam niamatu, kyu grai she hpyi shaja ga. KK gaw chyalai n-gun jaw ya u ga ngu,
FBR REPORT: Burma Army Mortars Villages and Burns Homes in Kachin State; 50,000 people displaced Kachin State, Burma
at 4/26/2012 09:17:00 AM
FBR REPORT: Burma Army Mortars Villages and Burns Homes in Kachin State; 50,000 people displaced Kachin State, Burma 24 April, 2012 KEY DEVELOPMENTS Burma Army fighting continues in Kachin State since the original outbreak of violence on9June 2011, when Burma Army soldiers broke the ceasefire previously held with the Kachin Independence Army (KIA). As Burma Army attacks continue, the KIA attempts to defend the population and numerous clashes have occurred between Burma Army and KIA soldiers. Burma Army soldiers have also repeatedly attacked civilian villages, often occupying and looting the village afterwards and forcing villagers to flee. Free Burma Ranger teams have collected multiple reports of extrajudicial killing, imprisonment and torture. There are over 50,000 Internally Displaced People in camps on the border, with thousands more hiding in the jungle. Map showing area of report On 8 April 2012, Burma Army soldiers attackedahill near Gan Dau Yang Village and N'Pawn Village, Wai Maw Township, on whichaChristian church and KIA outpost are both located. Burma Army soldiers shelled 120mm and 81mm mortar the hill every 15 minutes throughout the day, shellingatotal of 40 mortar rounds. Attacks continued the following morning, with Burma Army soldiers shelling an additional 60 mortars. Burma Army Infantry Battalions (IB) 390 and 260 started burning the N'Pawn Village on 27 March 2012, and resumed on5April 2012 after clashes with the Kachin Independence Army (KIA). Eighty houses have been burned down. There are currently three battalions with 300 Burma Army soldiers in N'Pawn Village, and eight battalions total in the area (IB 340, 389, 260, 348, 398, 305, 360 and 380), totaling approximately 1,000 soldiers. Homes burning in N'Pawn Village, Wai Maw District where IB 390, 260, and 389 have burnt 80 homes. On 28 March 2012 at 12:30 pm, Wa Pyat Village, Wai Maw Township, was burned by Burma Army IB 438. The battalion had 300 soldiers, with 200 soldiers outside the village while 100 soldiers occupied the village. The burning of Wa Pyat Village,avillage of 15-20 households, followed fighting with the Kachin Independence Army (KIA) that happened the day prior, 27 March 2012. Civilian casualties have not yet been determined, but three Burma Army soldiers have been confirmed dead. On 18 March 2012, LIB 384 and LIB 360 attacked KIA troops between Gawng Dau Village and N'Pawn Village. On 22 March 2012, the fighting continued at N'Pawn (where days later, Burma Army soldiers burned several homes). On the morning of 25 March 2012, the fighting continued at Nam Sam Yang, where Burma Army troops mortared the village and burned nine houses. Multiple restaurants and stores beside the road were destroyed when the village was mortared. Over 200 Burma Army soldiers patrolled around Nam Sam Yang Village and were equipped with rifles, 60mm and 80mm mortars, and M79 launchers. The remains ofahome burned by Burma Army soldiers in Nam Sam Yang Village on 25 March 2012. Stores that were destroyed by mortars in Nam Sam Yang Village on 25 March 2012. On 15 March 2012 in Momauk Township, Burma Army IB 69 under Light Infantry Division (LID) 99 mortaredaKIA camp near Ban Htang Village. Fighting has been ongoing between the KIA and the Burma Army in the area, while the Burma Army has consistently resupplied troops, patrolled the area, and occupied civilian villages. There are currently over 12,000 Burma Army troops throughout Kachin State. God Bless You, Free Burma Ranger Kachin Teams The Free Burma Rangers’ (FBR) mission is to provide hope, help and love to internally displaced people inside Burma, regardless of ethnicity or religion. Usinganetwork of indigenous field teams, FBR reports on human rights abuses, casualties and the humanitarian needs of people who are under the oppression of the Burma Army. FBR provides medical, spiritual and educational resources for IDP communities as they struggle to survive Burmese military attacks. For more information, please visit www.freeburmarangers.org KEY DEVELOPMENTS Burma Army fighting continues in Kachin State since the original outbreak of violence on9June 2011, when Burma Army soldiers broke the ceasefire previously held with the Kachin Independence Army (KIA). As Burma Army attacks continue, the KIA attempts to defend the population and numerous clashes have occurred between Burma Army and KIA soldiers. Burma Army soldiers have also repeatedly attacked civilian villages, often occupying and looting the village afterwards and forcing villagers to flee. Free Burma Ranger teams have collected multiple reports of extrajudicial killing, imprisonment and torture. There are over 50,000 Internally Displaced People in camps on the border, with thousands more hiding in the jungle. Map showing area of report On 8 April 2012, Burma Army soldiers attackedahill near Gan Dau Yang Village and N'Pawn Village, Wai Maw Township, on whichaChristian church and KIA outpost are both located. Burma Army soldiers shelled 120mm and 81mm mortar the hill every 15 minutes throughout the day, shellingatotal of 40 mortar rounds. Attacks continued the following morning, with Burma Army soldiers shelling an additional 60 mortars. Burma Army Infantry Battalions (IB) 390 and 260 started burning the N'Pawn Village on 27 March 2012, and resumed on5April 2012 after clashes with the Kachin Independence Army (KIA). Eighty houses have been burned down. There are currently three battalions with 300 Burma Army soldiers in N'Pawn Village, and eight battalions total in the area (IB 340, 389, 260, 348, 398, 305, 360 and 380), totaling approximately 1,000 soldiers. Homes burning in N'Pawn Village, Wai Maw District where IB 390, 260, and 389 have burnt 80 homes. On 28 March 2012 at 12:30 pm, Wa Pyat Village, Wai Maw Township, was burned by Burma Army IB 438. The battalion had 300 soldiers, with 200 soldiers outside the village while 100 soldiers occupied the village. The burning of Wa Pyat Village,avillage of 15-20 households, followed fighting with the Kachin Independence Army (KIA) that happened the day prior, 27 March 2012. Civilian casualties have not yet been determined, but three Burma Army soldiers have been confirmed dead. On 18 March 2012, LIB 384 and LIB 360 attacked KIA troops between Gawng Dau Village and N'Pawn Village. On 22 March 2012, the fighting continued at N'Pawn (where days later, Burma Army soldiers burned several homes). On the morning of 25 March 2012, the fighting continued at Nam Sam Yang, where Burma Army troops mortared the village and burned nine houses. Multiple restaurants and stores beside the road were destroyed when the village was mortared. Over 200 Burma Army soldiers patrolled around Nam Sam Yang Village and were equipped with rifles, 60mm and 80mm mortars, and M79 launchers. The remains ofahome burned by Burma Army soldiers in Nam Sam Yang Village on 25 March 2012. Stores that were destroyed by mortars in Nam Sam Yang Village on 25 March 2012. On 15 March 2012 in Momauk Township, Burma Army IB 69 under Light Infantry Division (LID) 99 mortaredaKIA camp near Ban Htang Village. Fighting has been ongoing between the KIA and the Burma Army in the area, while the Burma Army has consistently resupplied troops, patrolled the area, and occupied civilian villages. There are currently over 12,000 Burma Army troops throughout Kachin State. God Bless You, Free Burma Ranger Kachin Teams The Free Burma Rangers’ (FBR) mission is to provide hope, help and love to internally displaced people inside Burma, regardless of ethnicity or religion. Usinganetwork of indigenous field teams, FBR reports on human rights abuses, casualties and the humanitarian needs of people who are under the oppression of the Burma Army. FBR provides medical, spiritual and educational resources for IDP communities as they struggle to survive Burmese military attacks. For more information, please visit www.freeburmarangers.org
at 4/25/2012 07:49:00 AM
Daini,"Special Request" ngu ai Ga shagawp ningnan bai shagun dat ai yaw. Tai gaw, Kachin ni kahkyin gumdin mat na hpe hkrit dik rai nga ai.Kachin ni bra magang shi kabu magang she rai law.Dai majaw, sai shawng garan kau ai shi rai nga ai. Daini KIO,KIA gaw, yawngamatu pu ba kawsi let,majan hkam nga yang,WP shada kau mi gaw, "Madat sha u ga" lama ngu hkrup ai rai yang, tinang hkum tinang ngu la ai she rai na sai. Akyu hpyi ai hte sha pyi n garum la ai wa gaw,Myu n tsaw, Mung n tsaw ai wa sha rai na re.Shani shagu majan byin nga ai. Ginjaw hpe wang matep la maw nga ma ai. Awng Padang lu ai ten du hkra hkam jan lu na kyu hpyi nga ga oi.
Grai kamhpa myit mada let,
at 4/24/2012 09:18:00 AM
Annau ni myit n hkrum dingsa, Galoi Mi She Awmdawm lu na mi re.Tai ni gaw mungdan ting na hpyenla shalun tik tik rai sai. Shagyeng shakat matep wang shinggrup magra la na she n nga i.Daini mung kade n tsan ai kaw hkying hkum mi chyen majan byin ai da. Laiza gaw moi moi kaw na kadai hpyen mung n shang ga ai mare re lam chye lu ai. Dinggrin lawt lu u ga. Kyu hpyi garum nga mi oi.
JIC+++Read more ++click on
Sik hkwi sha (1 )
Sik hkwi sha (2 )
To : - All The International Political Leaders
at 4/24/2012 09:13:00 AM
(1) The United States of America
(2) The British Government
(3) The United Nations
(4) The Chinese Government
(5) The Indian Government
(6) The Japanese Government
(7) The Association of the South East Asian Nations
Ndai kaw dip nna hti la ga
Chauvinism Vs Democracy in Burma -Click on (1 )
Burmese Military Chauvinism Vs Democracy in Burma -Click on (2)
No news is Good news in Myanmar -Click on (3 )
Saw shaga laika ( click on)
at 4/21/2012 11:22:00 AM
KIA's helicopter flying-Video ( click )
at 4/21/2012 11:19:00 AM
Kachin Media kaw na lajang ai sumla hkrung re.Yu chyai ga
Nta wa nu
at 4/21/2012 11:10:00 AM
Hkawp myitrum manang ni, daini anhte Myit n hkrum yang n mai sai, myit hkrum yang gaw anhteaBandung ani sha rai sai.Daini na Ga shagawp,"N ta Wa Sanu (M) " ngu shagawp dat sai.Shanhte wa mat yang ngut na sha rai sai.
JIC ++read more++click on++
Miwa TV kaw na Kachinalam
at 4/20/2012 11:15:00 AM
Translate by(冯怀怡 )
JP KIA gaw na phone hte direct shaga ai shiga re nga ai. myen ahsuya gaw masha dat di ''Stop Fire " na matu tsun ai . Baina KIA hku na gaw "Stop Fire "galaw na matu gaw KIA maga na ra ai2hpyi ai.(1)KIA hku na gaw Myen ni hpe ' Tsun na malai kaja wa galaw na hpe ra sharawng sai' an hte KIA maga na shara2gaw Myen ahsuya ni nga taw ai.Dai shara kaw na yen na matu.pin lung ga sadi laika gaw na hte maren galaw na matu .(2)myen asuya ah ya shi kaba gaw na sahwng lam de 'Stop Fire agreement letter' hpe KIA maga na mu mayu ai. ( China Border maga gaw na refugee hte seng di ma KIA maga na tsun mayu ai nga ai.ya majan na majaw hprawng nga ai ni hpe ma Refugee ngu di gaw n mai tsun shi ai.majan zin mat yang shan hte ni ma shan hte ,hte seng ang nga ai magam bung li ni hpe bai galaw lu sha na re.ya gaw shan hte ma majawamajaw hprawng taw nga ra ai re.KIA maga ma mai byin ai ram gaw garum taw nga ai re. Myit song mali hka wam hte seng di ma KIA gaw na ni gaw mung shawa masha ni yawng na matu kaja na teng man ai re yang gaw KIA gaw na ma tsun hpa,hpa n nga na re.mung shawa masha na matu Economic matu kaja di, sim sa na re yang MiWA ni hpe ma KIA maga gaw hpa Disturb n jaw na re. ) ( P.S JP laika n law sha di naw chye na ya rit.hpang de grau grau na 'Try the best' na re. )
Interview withaTarlawgyi villager
at 4/20/2012 10:50:00 AM
Myen hpyen ni laknak kaba gap bun ai hte seng nna Da Law Mare na Slg. Maung San hte san htai
Ana Kap Mat A
at 4/20/2012 09:05:00 AM
Shanglawt Tsing ni nau myit htum nna, she mani mayu mat sai. La myit htum yang si ai ......da. Num myit htum yang mani ai da. Dai majaw La ni hta Num ni myit grau ja ai hku rai nga ai ngu, Num myit arang bai sharawt la rai; ndai , "Ana Kap Mat Ai" Ga shagawp bai lu gawp dat ai rai sai. Majan gaw shani shagu matut byin nga ai. Nahpaw de daini, Jigrawng nbungli 1 lungwa ai hpe hkap gap yang MKA de bai yu mat wa nhtawm, kalang bai lung wa ai da. Lusha wa sa sa rai ma ai lam chye lu ai.
at 4/20/2012 08:58:00 AM
ကချင်ပြည်ဝန်ကြီး ဒူဝါဇန်ထားဆင်ကတော့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန်ပါတဲ့.။ ဦးနုခေါင်းဆောင်တဲ့ ဖဆပလအစိုးရက ကချင်ပိုင်နက် ဖီမော်၊ ဂေါ်လမ်၊ ကန်ဖန်ဒေသတွေကို တရုတ်နိုင်ငံဆီ ရောင်းစားလိုက်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်နာမည်ပါ.။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုပေမဲ့ ပြည်သူ့သဘောထားကို အလေးမထား၊ ကချင်လူထုကို တစ်ချက်မှ မတိုင်ပင်ဘဲ၊ ကချင်ပိုင်နက်မြေကို လက်ဆောင်ပေးသလိုပေးလိုက်လို့ ဒူဝါဇန်ထားဆင်က အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လျက်နဲ့ ပြည်မအစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ဝေဖန်ခဲ့တာပါ.။
သမိုင်းတစ်ပတ်လည်တယ်ပဲ ပြောရမလား.၊ ခုလဲ ထိုနည်းနှင်နှင်ပါပဲ..။ ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန်၊ ဒီမိုကရေစီဇောက်ထိုး မဟုတ်တောင်၊ ဒီမိုကရေစီကန့်လန့် လောက်တော့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်.။ ဘုရားကအောက်၊ မျောက်ကအထက်ဆိုသလို အဖေထက်သားတစ်လကြီးနေတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ကမောက်ကမနိုင်ပုံတွေက ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်၊ အားလုံးအသိမို့ ဒီမိုကရေစီကန့်လန့်လို့ပြောတာကို သဘောမတူတဲ့သူ မရှိလောက်ပါဘူးနော်.။ ကျနော်ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတုန်းက ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့သလို၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ ယုံကြည်လောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမတွေ့တဲ့အတွက် မဲပေးဖို့နေနေသာသာ၊ မဲစားရင်းမှာ ကိုယ့်နာမည်ပါလား၊ မပါလားတောင် သွားမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.။ (ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ မဲပေးခွင့်မကြုံလိုက်ပါဘူး.။) ဆိုလိုတာကတော့ လက်ရှိလွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအာဏာရနေခြင်းမှာ ကျနော့်ပယောဂမပါပါဘူး..။ “My hands are clean” ပါ.။ နို့ပေမဲ့.. ဇောက်ထိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီမိုကရေစီက ဒီမိုကရေစီပဲမဟုတ်လား.။ အများဆန္ဒကို လိုက်နာရမှာပေါ့.။ လူနဲစုရဲ့သဘောထားကို လေးစားတန်ဖိုးထားလျက် လူများစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်တာဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်ကတော့ ငါထောက်ခံတဲ့အစိုးရမဟုတ်လို့ ဘာမဆို ကလန်ကဆန်လုပ်မယ်၊ ငါသဘောတူတဲ့အလံတော်မဟုတ်လို့ အလေးမပြုဘူးလို့ မစဉ်းစားပါဘူး..။ အများဆန္ဒကို လေးစားပါတယ်.၊ ကျေနပ်ပါတယ်.။
အဲ.. ကျနော်မကျေနပ်နိုင်တာက အနှီ ကန့်လန့်ဖြစ်နေတာကြီးပါ..။ အများရဲ့ ရွေးကောက်မှုမဟုတ်ဘဲ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်သလို ဒါရိုက်တာဘဘကြီးက “ဟိုကောင် ထိပ်ကွက် မင်းက မင်းသားလုပ်၊ ဗိုက်ပူ မင်းကဇာတ်ပြိုင်၊ ဟို ပုကွကွနဲ့ကောင် မင်းက သေနတ်ကိုင် ဗီလိန်လုပ်စမ်း”ဆိုပြီး၊ နေရာချထားပြီးမှ၊ လူထုကို ဒီလူတွေကိုပဲ ပြန်မဲပေးရွေးခိုင်းတာကြီးက ဒီမိုကရေစီအခွံကြီးထဲမှာတော့ အရမ်းကြည့်လို့တဲ့ ဇာတ်ကားပါပဲ..။ဟုတ်ကဲ့.၊ ဒီလို သတ်မှတ်ထားပြီးသားလူကိုပဲ ပြန်ရွေးခိုင်းခြင်းက နံပါတ်တစ် ဇောက်ထိုးဖြစ်မှုပါ.။ မျိုးစေ့မှန်မှ အပင်သန်မှာမို့၊ နဂိုကတည်းက ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးကနေ ဘယ်လိုအသီးအပွင့်တွေမျှော်လင့်ရမလဲတောင် မသိတော့ပါဘူး.။
အရင်ကာချုပ်က သူ့သဘောနဲ့သူ နေရာချခဲ့သလို၊ နောက်ကာချုပ်ကိုလဲ အစိတ်ဖိုး အာဏာအပ်နှင်းခဲ့ပါသေးတယ်.။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာ ကျနော်နားလည်တဲ့ စစ်သားဆိုတာက ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းပါ.။ ပြည်သူတွေရဲ့ ၀န်ကိုထမ်းမယ့်၊ ပြည်သူ့အစေကိုခံမယ့်၊ ပြည်သူရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်အပြည့်အ၀ရှိရမယ့် အင်အားစုပါ.။ အခုဖြစ်နေပုံအရ ကာချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတော်ကြီးက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာ ထီးထီးကြီးပေါလောပေါ်နေပါတယ်..။ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေထဲမှာ ပြည်သူလူထုက ကာချုပ်ကို ရွေးချယ်ခန့်ထားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ မပါသလို၊ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ကာချုပ်ကို ဘယ်သူက အမိန့်ပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ မပြတ်သားပါဘူး.။ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ဘယ်သူက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသူလဲဆိုတာ အမိန့်စီးဆင်းပုံ မပြေပြစ်ပါဘူး..။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကို အမိန့်ပေး၊ ၀န်ကြီးကနေမှ ကာချုပ်ကိုညွှန်ကြား..၊ အဲလိုဖြစ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကာချုပ်က ဒုသမ္မတအဆင့်ပါ.။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးထက် ရာထူးကြီးသလို၊ (သူကိုယ်တိုင်က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုပြန်ခန့်တာပါ.) သမ္မတကလဲ ကာချုပ်ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးအပိုင်းမှာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့် ကန့်သတ်ခံထားရပါတယ်..။ ဆိုလိုတာက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကာချုပ်ဟာ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ မရှိပါဘူး.။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကာချုပ်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့အောက်မှာ မရှိပါဘူး.။ ဒါပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပက လူထုရဲ့စည်းလုံးမှုအားနဲ့ ကာချုပ်ကို ထိန်းကွပ်နိုင်မှာကို မှတ်ထားရပါမယ်..။
ကချင်တပ်မတော်နဲ့ ပြည်မတပ် လောလောလတ်တ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်မမှာရှိတဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားများနဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုတွေကို ကျနော်ဒီနေရာကနေ ရှင်းပြချင်ပါတယ်.။ ဘယ်သူတွေ လွန်သလဲ. ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ. ဆိုတာ နဲနဲဆွေးနွေးပါ့မယ်.။ ပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာလဲ တစ်တပ်တစ်အားကူညီကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်.။ လက်ရှိအစိုးရဟာ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ (ဒီမိုကရေစီသဘောအရ) ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစိုးရဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအစိုးရဟာလဲ ကချင်အမျိုးသားတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာတော့ Common ground အဖြစ် သတ်မှတ်ထားဖို့ လိုပါမယ်.။
မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအစိုးရနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တွေရဲ့အကြောင်း နဲနဲရှင်းပြပါရစေ.။ KIO ဟာ ကချင်လူထုကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်.။ ကိုလိုနီခေတ် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးလို တစ်မျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်.။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Autonomy နဲ့ Federalism ပါ.။ မသမာသူတွေ ၀ါဒဖြန့်သလို၊ ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ပါဘူး.။ မဟုတ်တော့ပါဘူး.။ တစ်ချိန်ကတော့ ပြည်ထောင်စုကနေခွဲထွက်ပြီး သီးခြား Wunpawng Gumrawng Gumtsa Mungdan (၀မ်ပေါင်သမ္မတနိုင်ငံ) ဆိုတာထူထောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးကို မမေ့စေချင်တာကတော့ ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးစဉ်က လိုတာထက်ပိုပြီး တက်ကြွခဲ့တာဟာ ကချင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ.။ နဂိုကတည်းက သီးခြားတိုင်းပြည်အနေနဲ့ နေချင်ရင် ပင်လုံစာချုပ်ဆိုတာ လှည့်ကြည့်စရာတောင် မလိုပါဘူး.။ ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့ ဥမကွဲ၊ သိုက်မပျက် စည်းစည်းလုံးလုံး၊ သာတူညီမျှ နေချင်လို့သာ ပြည်ထောင်စုထဲ ၀င်လာတာပါ.။ ဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာဘူးလေ..။ ပြည်ထောင်စုနဲ့ မဆိုင်သလိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်.။ ခုပဲကြည့်.၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့်မရဘူး..။ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရပေမဲ့ ကချင်တွေမပါပြန်ပါဘူး..။ ပြည်ထောင်စုထဲကနေ ခွဲထုတ်ခံနေရပါတယ်..။ ခွဲထွက်ချင်တာမဟုတ်ဘဲ ခွဲထုတ်ခံရတာပါ..။ ခွဲထုတ်ခံရလို့ ခွဲထွက်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တာပါ.။ ဒါကြောင့် တစ်ချိန်ကတော့ သီးခြားတိုင်းပြည်အနေနဲ့ ခွဲထွက်ဖို့အထိ မူဝါဒပိုင်းတင်းမာခဲ့ပါတယ်..။ ကြာခဲ့ပါပြီ..။ ခုတော့ Federal Union (ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရေးရှင်းကြီး)ထဲက Wunpawng Gumrawng Gumtsa Mungdan (၀မ်ပေါင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်ထောင်)အဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်.။ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလဲ တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်ဘက်သတ်အာဏာချုပ်ကိုင်မှုမရှိဘဲ၊ အများဆန္ဒခံယူလျက် ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့သာ မျှတစွာ တာဝန်ယူနေကြပါတယ်..။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ စဉ်းတောင်မစဉ်းစားဖူးပါဘူး.။
အဲဒီတော့ လက်ရှိ ပြည်မတပ်မတော်ဆင်နွဲနေတဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေဟာ ဘယ်သူ့သဘောနဲ့ ဖြစ်သလဲဆိုတာ မေးပါရစေ.။ သမ္မတကြီးက ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမယ်လို့ ပြောထားပါရက်နဲ့၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကို ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ ဘယ်သူအမိန့်ပေးပါသလဲ..။ သမ္မတကြီးက “ပြည်မတပ်အားလုံး ၂၀၁၁၊ ဇွန်မတိုင်ခင်က အနေအထားအထိ ပြန်ဆုတ်ခွာပါ.၊ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အနီးကပ်ထိတွေ့မှု မဖြစ်ပေါ်အောင် စစ်ကြောင်းမထွက်ပါနဲ့.၊ တိုက်ကင်းမထွက်ပါနဲ့” လို့ ဘာလို့ အမိန့်မပေးတာပါလဲ.။ မပေးနိုင်လို့လား.၊ မပေးချင်လို့လား.။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်၊ ပထမအဆင့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးက ဒီလောက်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုရင် ဘာလို့ (နဂိုကတည်းကရှိပြီးသား) ၁၉၉၄ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်ခဲ့ပါသလဲ..။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို ကိုယ်ကစပြီး ချိုးဖောက်ခဲ့ပါရက်နဲ့ ဘာလို့ ခုမှအသဲအသန် “အပစ်မရပ်ရင်၊ နိုင်ငံရေးမဆွေးနွေးဘူး”လို့ ဖြစ်ရပါသလဲ..။ အနဲဆုံးတော့ အပစ်မရပ်ခြင်းဟာ “ကချင်တပ်မတော်က သဘောထားတင်းမာလို့ ဖြစ်တယ်”လို့ ဘာကြောင့် မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြောရပါသလဲ..။ သမ္မတကခန့်ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့က အပစ်ရပ်ဖို့ ဆွေးနွေးပွဲဝင်နေချိန်မှာ၊ တပ်မတော်က ဘာလို့ အပစ်မရပ်နိုင်အောင် လုပ်နေရပါသလဲ..။ ကချင်တွေအပြစ်ဖြစ်အောင် ကြိုပြီးတော့များ လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားကြလေသလား.။ ဒါတွေ စဉ်းစားကြည့်တော့ သဘောထားမမှန်တာ၊ အနိုင်အထက်ပြုကျင့်ချင်တာဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ရှင်းလာပါတယ်.။
ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူနဲ့ ခုခံတွန်းလှန်သူကြားမှာ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတို့ ဘယ်သူဘက်က ရပ်တည်မှာပါလဲ.။ ဘယ်သူ့အလွန်ဖြစ်ပါသလဲ.။ ကချင်တပ်မတော်အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်ဒေသထဲဝင်လာတဲ့ ဘယ်နယ်ချဲ့တပ်ကိုမဆို ခံပစ်ရမှာပါပဲ..။ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တပ်မှမဟုတ်ပါဘူး.၊ တရုတ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံး အမေရိကန်တပ်ဆိုရင်တောင် မတရားကျူးကျော်ဝင်လာရင်တော့ ပစ်ရမှာပဲ..။ “ရပါတယ်..၊ ခင်ဗျားတို့တပ်တွေ ၀င်လာပါ..၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပြီးမှ ပြန်ထွက်သွားကြပေါ့”လို့ လုပ်ရင် သီပေါမင်းလို ပါတော်မူကုန်မှာပေါ့.။ ကိုယ့်ဒေသထဲ နယ်ချဲ့တပ်တွေကို အသာတကြည်အ၀င်ခံရအောင်၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအစိုးရနဲ့ ကချင်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေက သီပေါမင်းနဲ့ ဘာမှမတော်ပါဘူး.။ လက်ရှိ Status quo အရ ကချင်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကလဲ အစွန်းမရောက်ပါဘူး.။ “ပြည်မတပ်မတော်ဟာ ကချင်ပြည်ထဲ လုံးဝတပ်မစွဲရ၊ အခြေမစိုက်ရ” လို့ သဘောမထားပါဘူး.။ ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပြည်နယ်တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကချင်ပြည်ထဲမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ အလုံးစုံထိန်းချုပ်မှုအောက်က ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်စစ်စစ် စနစ်တကျတပ်စွဲရမှာပါ.။ အလားတူပဲ ပြည်နယ်အစိုးရအောက်မှာ ပြည်နယ်တပ်မတော်ကိုလဲ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခွင့် ပြုရပါမယ်.။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်စစ်စစ်မဖွဲ့စည်းနိုင်မီ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှု ယိုင်နဲ့နေချိန်မှာ ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားတွေကို ရှောင်ကျင်စေချင်ပါတယ်.။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့အရေး၊ ပြည်မတပ်မတော်အနေနဲ့ ပစ်ဖို့မလိုအောင်သာ နေပေးပါ.။ ဒါဆို အများကြီး အရာရောက်ပါတယ်.။ ၁၉၉၄ စာချုပ်ကို ပြန်အသက်သွင်းရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်.။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ ကြားမှာအာမခံပေးမဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကို ကချင်တွေတောင်းဆိုပါတယ်.။ ၁၉၉၄မှာ အပစ်ရပ်သဘောတူညီမှုရှိရက်နဲ့ ပြည်မတပ်က မထင်ရင်မထင်သလို၊ ၀င်ပစ်တတ်ပါတယ်.။ ခုလို တိုက်ပွဲကြီးတွေပြန်စတာဟာလဲ ပြည်မတပ်က စတာပါ.။ ဒါကြောင့် အပစ်ရပ်ကြစို့ဆိုရုံနဲ့ အပစ်ရပ်လိုက်၊ နောက်မှ “ဘွာတေး”ဆို ပြန်ပစ်လိုက်လုပ်နေရင် ခံရမှာက ကချင်ပြည်သူလူထုသာဖြစ်ပါတယ်.။ ကုန်ကုန်ပြောရရင်ဗျာ..၊ ကချင်တပ်မတော်က သမ္မတကြီးနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့သဘောတူပြီး၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ၀င်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ တပ်မတော်က ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လိုင်ဇာကို ၀င်သိမ်းလိုက်ရင် ဘယ်သူဖြေရှင်းပေးမှာလဲ.။ ဒီတစ်ခါတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်မှာ ပြည်မဘက်မှာဂုဏ်သိက္ခာရှိသူတစ်ယောက်လောက်တော့ ပါစေချင်ပါတယ်.။
ဒါကြောင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့အတွက်ဆိုရင်
၁။ ပြည်မတပ်အနေနဲ့ ကချင်တပ်မတော်ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှ ဝေးရာကို နောက်ဆုတ်ရပါမယ်..။
၂။ ခိုင်မာတဲ့၊ အာမခံချက်ရှိတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်တစ်ရပ်ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များရှေ့မှောက်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရပါမယ်.။
၃။ တန်းတူညီမျှမှု၊ မသမာမှုကင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကနေတဆင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီ ဦးတည်ရပါမယ်..။
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆီချီတက်ရာမှာ အပစ်ရပ်ရေးဟာ ပထမခြေလှမ်းပါ.။ ဒီခြေလှမ်းတောင် ဖြောင့်အောင်မလှမ်းနိုင်ရင် ရှေ့ဆက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ.။ အပစ်ရပ်ရေးနဲ့ ဒုက္ခသည်များကိုယ့်ဒေသကိုယ်ပြန်နိုင်ရေးက အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်.။ ပြည်မမှာ ကျနော်တို့တတွေ လုံလုံခြုံခြုံရှိနေကြချိန်၊ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကျနော်တို့ သွေးချင်းတွေ ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်နဲ့ ဒုက္ခခံနေရပါတယ်.။ နာမကျန်းဖြစ်နေကြပါတယ်.။ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ငြိုငြင်မှု ခံနေရပါတယ်.။ တစ်ချို့ခမျာ စခန်းဆီတောင် ရောက်မလာနိုင်ဘဲ၊ လမ်းမှာတင် ပြည်မတပ်မတော်သားတွေ ဖမ်းဆီးပြီး၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ အရှင်လတ်လတ်မြေမြှုပ်ပစ်တာတွေ ရှိနေပါတယ်.။ နမ့်ဖတ်ကာလိုမြို့မှာတောင်၊ တပ်မတော်သားတွေက ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်၊ သူများအိမ်ဝင်းထဲ ၀ါးဝင်ခုတ်၊ သစ်ဝင်ခုတ်၊ ၀က်ဝင်ခိုးနဲ့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတာပါ.။ လက်နက်ပြပြီး ဓမြတိုက်နေတာပါ.။ ပြည်သူလူထုကို သိစေချင်ပါတယ်.။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကိုလဲ တောင်းဆိုလိုပါတယ်.။
လက်ရှိအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ရပ်အားလုံးဟာ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်..။ သမ္မတဆိုတာလဲ ပြည်သူလူထုရွေးချယ်ထားတဲ့အတွက် သမ္မတဖြစ်နေတာပါ.။ ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားဆန္ဒကို ဖော်ဆောင်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်.။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလဲ၊ (ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းကပဲဖြစ်လာလာ၊) ခုချိန်မှာတော့ ပြည်သူကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်နေရပါတော့မယ်.။ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒအမှန်ကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ထုတ်ဖော်ကြေညာပေးရပါမယ်.။ ယခင်စစ်အစိုးရကတော့ ပြည်သူ့သဘောထားမပါဘဲ၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုပေမဲ့၊ ခုချိန် ဒီမိုကရေစီအစိုးရခေတ်မှာတော့ အစိုးရလုပ်သမျှဟာ ပြည်သူလူထုက ခွင့်ပြုမှ ဖြစ်မှာပါ.။ ကချင်ဒေသကို ထိုးစစ်ဆင်နေတာဟာလဲ ပြည်သူလူထုက ခွင့်ပြုမှဖြစ်ရပါမယ်.။ ပြည်သူလူထုက မတိုက်နဲ့၊ နောက်ဆုတ်ဆိုရင် အာဏာတစ်မတ်သားပိုင်ရှင် ကာချုပ်လဲ သူ့တပ်ကို ပြန်ရုတ်ရမှာပါ.။ မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ ကျနော်တို့ အသံတစ်သံတည်းနဲ့ ၀ိုင်တွန်းခဲ့ကြသလို၊ ခုလဲ ပြည်သူ့ဆန္ဒအမှန်ကို ဖွင့်ထုတ်ဖို့ လိုနေပါတယ်..။ ပြည်မရဲ့ နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းမှာ အစိုးရကို တည့်မတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့၊ စတုတ္ထမဏ္ဋိုင်တွေအနေနဲ့လဲ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးမှာ အစိုးရလုပ်သမျှ ပြန်ကြားပေးတဲ့သတင်းပေးသက်သက်ထက် ပိုပြီးတာဝန်ယူဖို့ လိုနေပါပြီ..။ တိုင်းရင်းသားရေးရာမှာလဲ အစိုးရကို ထိန်းကြောင်းပေးဖို့ လိုနေပါပြီ..။
တောင်ပေါ်မှာ အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့သူတွေက သူတို့ကို အနိုင်ကျင့်နေတဲ့တပ်ဟာ ဗမာတပ်လို့ပဲ မြင်ကြပါတယ်.။ တကယ်လဲ အဲဒီတပ်ထဲမှာ ဗမာတိုင်းရင်းသားများပဲ ပါပါတယ်.။ ကြာလာတော့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတစ်ရပ်လုံးကို အမြင်စောင်းလာပါတယ်.။ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ်လာရပါတယ်.။ ဒါတွေကို သတိထားဖို့ လိုနေပါပြီ..။ ကိုယ်ရွေးကောက်ထားတဲ့ အစိုးရ၊ ကိုယ့်တပ်မတော်ကို ကိုယ်ပြန်ထိန်းနိုင်မှ တိုင်းရင်းသာစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကာကွယ်နိုင်မယ့် အခြေအနေရောက်နေပါပြီ..။ လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ထိုင်နေတဲ့ မိုးကျရွှေကို တစ်မတ်သားကို ဖယ်ထုတ်ဖို့လိုရင် ဖယ်ထုတ်ရပါမယ်.။ လွတ်တော်အမတ် ၇၅% သဘောတူတဲ့အပြင်၊ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ထောက်ခံမဲ ၅၀% အထက်ရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ တော်တော်တော့ မလွယ်ပါဘူး..။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်တွေ ကန့်ကွက်ကြဖို့ရှိပေမဲ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက အသံတစ်သံတည်းနဲ့ တောင်းဆိုရင် ဘယ်လိုအမတ်တွေမှ ငြင်းပယ်ခွင့်မရှိပါ.။
ဗြမစိုရ်တရားထွန်ကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြား မတရားမှုတွေ၊ ဖိနှိပ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ရှိနေတာ ရှက်ဖို့ကောင်းလှပါတယ်..။ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် လုပ်ရပ်တွေကတော့၊ သူ့သဘောနဲ့သူမို့ ဘာမှပြောစရာ မရှိပါ.။ အခုတော့ ပြောင်းလဲကုန်ပါပြီ.။ ပြည်မအစိုးရကိုယ်နှိုက် ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ် ၀င်တိုးတော့မယ့် အခိုက်အတန့်ပါ.။ လုပ်သင့်တာလုပ်နေတာပါလို့ လွတ်ထားလို့ မရတော့ပါဘူး.။ ပြည်သူ့သဘောထားအမှန်ကို လိုက်နာတဲ့ အစိုးရဖြစ်အောင်၊ ထိန်းကျောင်းနေရပါမယ်.။ မြစ်ဆုံအရေးကိုပဲ ဥပမာယူကြရအောင်.။ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြည်သူဆန္ဒကို မမေးစမ်းဘဲ၊ ဇွတ်တိုက်လုပ်ခဲ့တာ၊ အခုဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်ကျတော့ ပြည်သူ့သဘောထားအစစ် ထုတ်ဖော်ပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ဘက် ဦးပြန်လှည့်နိုင်ခဲ့ပါပြီ..။ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတွေမှာလဲ ကျနော်တို့ လူထုတစ်ရပ်လုံး ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ ကိုယ်ရွေးကောက်ထားတဲ့ အစိုးရကို ထိန်းကျောင်းကြရအောင်ပါ..။
ကိုယ့်အစိုးရ၊ ကိုယ့်တပ်မတော်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကိုယ်စားပြုပေးခြင်းဖြင့် တာဝန်ခံ ထိန်းကျောင်းကြဖို့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်..။
Kam rit( Myen pdf file )
at 4/19/2012 11:58:00 AM
"TRUST" Myen hku bai ka shagun dat ai. Daini anhte byin hkrum hkra nga ai lam ni gaw, anhteashawnglam hpe KK kaja dik htum ai hku galaw ya nga ai ngu, myit la ga i. Anhte myit ai hta KK myit ai gaw grau madang tsaw nga ai ngu nna myit shapyaw la ga oi.
semi free Burma ( PDF file ) click
at 4/19/2012 11:55:00 AM
Semi Free Burma
at 4/18/2012 10:46:00 AM
Ginjaw salum hpe, "TRUST" matsing hpa ga yan ni hte n-gun jaw dat ai re yaw. Daini, shingchyut raitim, hpawtni grai tsawm ai palamla , daini bunghku ju hpun kaw na hpawt ni grai tsawm ai nampan pu sana re. Ante hpyi ai hte maren, kam sham ga. Myit n-ru ga ngu, n-gun jaw dat ai.
JIC+++read more++click on+++
ကချင်KIO နဲ့ မြန်မာအကြား လက်ရှိအခြေအနေ | ABC Radio Australia
at 4/18/2012 10:40:00 AM
မြန်မာအစိုးရက ​တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအတော်များများနဲ့ ​အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးယူနိူင်ခဲ့ပြီး ​ကချင်ကေအိုင်အေအဖွဲ့နဲ့ ​ဘာ့ကြောင့် ​ခုချိန်ထိ ​အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမလုပ်နိူင်သေးတဲ့အကြောင်းကို ​သြစတြေးလျကို ​လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ ​ကေအိုင်အေအဖွဲ့က ​ဗိုလ်မှူးကြီး ​James ​Lum ​Dau ​ကို ​မခင်မာဝင်းက ​တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကို ​နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။++click On++
Ndai shiga hte seng nna garu nga ai lam gaw Media hte gasat ai re dum ga
at 4/18/2012 10:25:00 AM
Tsaw ra ai Myu Tsaw share shagan ni hte Jinghpaw Wunpawng myu sha niemyit ndaw ga,myit n kaprau ga,ngang ngang tsap let,Galaw ra ai hpe gwi gwi galaw ga,Ning sin lai nna ning htoi de rai wa sai.Yehowa Karai kasang gaw an hte yawng hte arau sha rai nga ai kam shut shara nnga ai.Tai hpyen wa gaw an hte hpe laknak n gun hte gasat ga nga yang shan hte sum machyi ai lam law wa sai hpe chye ai majaw ladat galai nna an hte hpe media hte mungdan kata shing gan gasat na matu tau hkrau nna lajang tawn ai lam sha rai na re.
တပ်ကြပ်ကျော်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၃၅ယောက် ဟာ မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် တာလောကြီး ကျေးရွာမှာ အခြေချနေတဲ့ ခလရ ၃၇ တပ်စခန်းကို ဒီလ ၁၆ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း က လက်နက်ချဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာ ရှမ်း၊ ဗမာ+++read More++
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဗမာ(forverfriends.ning.com)
at 4/17/2012 09:48:00 AM
ဒီစာကို ရေးရခြင်း ကတော့ ကျနော် တို့ မြန်မာတွေ ကျွန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြော ခြင်တာပါ
စာမရေးတတ် အစီအစဉ် မတည့်ရင် ခွင့်လွတ်ကြပါဗျာ
မောင်ချစ် ရေးခြင်တာ လက်ယားနေပေမယ့်မောင်ချစ် စာရေးဘို့ထောက် အထားတွေ
တင်ပြဘို့ ဆိုတာ အချိန်တခုပေးရမယ် သတင်းတွေ ကို စုံစမ်း တိကျမှ အထောက်အထားဆိုတာကောင်းတာလေ ၁၅ရက်နေ့ ကတော့တွေ့ လိုက်ပါတယ်
စကားဦိးသန်းနေတာနှင့် မောင်ချစ်ပြောချင်တာ မရောက်သေးဘူး။ မြန်မာအစိုး၇ က အားလုံး ကိုဖွင့်ပေးနေပီ နိုင်ငံတကာက ကုမ္မဏီတွေ အလုအယက် မြန်မာပြည်သွားနေကြတယ်
ဆိုလို့ မောင်ချစ် မစားရ ၀ခမန်း ၀မ်းသာနေတာ တကယ်ပါ မလေးရှားဝန်ကြီး ချုပ် ဦးနာဂျစ်တောင် အပြေးအလွှားသွားတယ်ဆိုဘဲ ဦးသိန်းစိန်နှင့် နားလည်မှုတွေ လုပ်တာ မောင်ချစ်တို့ နားစွင့်နေကြတာပေါ့ ပြီးတော့ သတင်း ကြီး တခု ထွက်လာတာကတော့ မြန်မာပြည်က မြန်မာ မလေးတွေ ကို မလေးမှာ အိမ်ဖေါ်ခေါ်မယ် ဆိုတာ သဘောတူ ပါသတဲ့
မောင်ချစ် တော် တော် တုန်လှုပ်ပြီး တော်တော်လေး အံ့ကို သြ သွားတယ်ဗျာ ဦးကြီးစိန်လုပ်ပုံ ဦးကြီးစိန် ကို မောင်ချစ် မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ တော်တော် လေးကို လေးစားနေတာ
ခုတော့ ဦးကြီးစိန်ရယ် မလေးရှားမှာ မိပြစ် ဖပြစ် ကူညီသူမရှိ ဘာသာခြားတွေ လက်အောက်တော့ ကျွန်မအဖြစ် မပို့ ပါနှင့် လို့ တောင်းပန်ပါရစေဗျာ
မလေးမှာ အိမ်ဖေါ်လုပ်မဲ့သူတွေဟာ အိမ်ရှင် ယောက်ျား ကခြေတော်တင် ရက်ရက်စက်စက် ခိုင်း လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံ နေကြတာတွေ ဒါတွေ ကို တခုစီ တင်ပြရရင် ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင် ငယ်ငယ် က ဘကြီးပြောပြတဲ့ တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင် ရှုံးဦးမယ် အများကြီး အများကြီးဗျ....
နောက်ပြီး မလေးမှာ ပြဿနာဖြစ်ရင် ဘယ်သူကူမလဲ အိမ်ဖေါ်ဆိုတာ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့် မရ ကလေးထိန်း အ၀တ်လျှော် ထမင်းချက် မီးပူထိုးအဲဒါအပြင် အိမ်ရှင် ဘဲ
ကရဲ့ကိုယ်လုပ်တော်က လုပ်ရသေး အဲဒါတွေ အကုန်ပေါင်းမှ ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ ကဲ.....
အင်ဒိုနီးရှားမတွေ ကို အဲလို လုပ် လို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုး ရ က အလုပ် တခုအတွက် အခြေခံ
လစာ ၅၀၀ ရင်းဂစ် ၂မျိုးခိုင်းပါက ၂လစာ ဆိုပြီး ပြောလို့ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ခွာပြဲ လို့မြန်မာ ကို
ခေါ်တာ။ ဦးကြီးစိန် ကို မောင်ချစ်တောင်းပန်ပါရစေ မောင်ချစ် တောသားပါ နိုင်ငံေ၇းလဲ နားမလည် မသိနားမလည်ပေ မယ့် ကျနော်တို့ လူမျိုး မြန်မာ အမျိုးသမီး တွေ ကိုတော့ ကျွန်ဇာတ် ဖါဇာတ် ( စားကားရင့်သီးရင်ခွင့်လွတ်ပါခင်မျာ) မသွင်းပါနှင့် လို့လေးလေး နက်နက်တောင်းပန်ပါရစေ အွန်လိုင်းတက်လာမိတ်သဟာ တို့ ကလဲ ဒီနေရာကနေ ကန့် 
ကွက်ကြပါလို့ နိုးဆော်ပါရစေ အမျိုးဘာသာ ကို ချစ်တတ်သူများ ဒီနေရာကနေအော်ပေးကြပါ
အမျိုးကို ချစ် လို့ မရေးတတ် ရေးတတ် ရေးလိုက်ခြင်းပါ စာရှည်ရင် စာဖတ်သူတွေ ငြီးငွေ့ 
မှာစို့ လို့လိုရင်းတိုရှင်းရေးလိုက်ပါတယ် အချိန်မရတာလဲပါပါတယ် အဖြစ်အပျက်တွေ ကတော့ တင်မပြတော့ပါဘူး မိန်းကလေးမပြောနှင့်ယောက်ျလေးတောင် လစာမပေးဘဲ ခိုင်းခံ ရတာတွေ မောင်ချစ်တို့ ဒေသကပါ ခုထိသူရှိနေပါသေးတယ် ဘယ်သူမှ မကယ်ပါဘူးဗျ အေးဂျင့် ကောလင်းနှင့်လာတဲ့ မောင်ချစ်တို့ အညာက ညီမငယ်လေး လစာ က စားစရိတ်လောက်ရတာ နှင့်တွေ့ လို့ ပြေးထွက်လာရတာ တွေ အများကြီး အများကြီး မြန်မမာ အမျိုးသမီးတို့ ရေ အဖေ အမေ အကို အမတွေ နှင့် ဝေးနေတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဖြစ်ရင် ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်ဘူးနော် အေးဂျင့်ကတော့ မစားရ၀ခမန်း ဂျပိုး လောက်ရတာ ကို လိပ်ရတယ် လို့ လိမ် မှာနော် ကျနော် တို့ က ဒီမှာနေ နေတဲ့သူမို့ ပြောပြတာပါ ဒီရောက်လာရင် မောင်ချစ်လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး ကြိုတင်တားတာပါ ဖြစ်လာရင် တော့ ဖြစ်ရလေ မမရယ် ဖြစ်ရလေ ညီမရယ် ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းဘဲပေးနိုင်ပါမယ်
အချုပ်ပြောရရင် မလေးရှား ဟာ အောက်ကျတဲ့နိုင်ငံပါ လူတန်းစား စိတ်ဓါတ်တော်တော်နိမ့်ကျပါတယ် မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ နှင့် မအပ်စပ်ပါဘူး အိမ်ဖေါ်အနေနှင့်မလာကြပါနှင့်ဗျာ
Tsaw ra ai KIA ( pdf file )
at 4/17/2012 09:14:00 AM
Hkawp myitrum manang ni, " cspfaomKIA"Ga baw hte Shawnglam Share Ninghkring
ni hpe n-gun kahtap jaw dat ai, Myen Ga shagawp re. Shanglam Hpa-awn ni hte hpyenma Share Ninghkring ni myit n daw na matu she akyu grau hpyi ra sai. Shawnglam de na mayak manghkang shiga n pyaw n ngawn ai ni grai na lu ai. Kyu hpyi tang n du ai rai kun? Hka wa, bra wa, hten wa, run wa, myit n pyaw hpa ni gaw,KK ahkaw ahkang jaw ya ai rai kun? Hpa mi rai rai, Yawbaamakam hpa anhte kri dung nga ra sai.
JIC+++read more+++click full
at 4/16/2012 08:27:00 AM
"Padang Shingran" ngu ai Ga shagawp nnan shagun dat sai yaw. Shawnglam Share Ninghkring ni hpe n-gun jaw ai re. Tai ni gaw,shanhteashaning ningnan ngut jang,15-16,2ya hta Laiza hpe nbungli hte Bom sharut bun sana re nga ma ai raitim, 15 ya nhtoi gaw apyaw sha lai mat sai. Daini 16 ya shani mung, Shanglawt Tsing ni jahpawt jau jau Padang Shingran hte Padang Dip kau sai. Matut n di akyu hpyi Ninghkring ni mung jau jau akyu hpyi shapyen kau sai re majaw n tsang ra sai yaw . Tai ni gaw, aging gasat yu nna,shanhte n dang jang Kachin ni hpyi ai Shanglawt kachyi mi jaw na , shanhte dang jang gaw Kachin State ngu ai mying pyi dawm kau na ngu ma ai da. Kyu hpyi gaw n mai shayawm na ga ai yaw. Ndai Ga shagawp hpe hti yu nna, Shawnglam Ninghkring niamatu akyu aja awa hpyi ga oi.
JIC:read More++click on++
တရုပ်ဟာ မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံ ဖြစ်လာတော့ မှာလား။
at 4/14/2012 10:55:00 AM
တရုပ်နိုင်ငံကို နောင်တက်လာမည့် မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတခုအဖြစ် ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေကပြောဆိုနေကြတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေ့အကျဆုံးသော ယဉ်ကျေးမှုပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည့် နိုင်ငံတွေများအနက်က တခုဖြစ်တယ်။ လူဦးရေက အဆမတန် များပြားနေပြီး၊ ဒုတိယစီးပွားရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာနေတယ်။
တရုပ်နိုင်ငံအကြောင်းကို မီဒီယာတွေကပြောဆိုနေဒါတွေနဲ့ ပကတိ ဖြစ်ပျက်နေဒါတွေတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက လုံးဝ မတူညီ ကြီးမားစွာ ကွာခြားနေဒါကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။
တရုပ်နိုင်ငံ၏ အား ဟာ စီးပွားရေုးုဖြစ်တယ်လို့ လူအများကထင်နေကြတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမေရိကန်ပြီးလျင် တရုပ်စီးပွားရေးဟာ ဒုတိယလိုက်နေဒါကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တရုပ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်လျင် (၁၀) ဆကျော်လောက် လျော့နည်းနေဒါကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီး၊ လူနေမှု့ အဆင့်အတန်းကို ကြည့်လိုက်လျင် နိုင်ငံ၏ (၈၅) ရာခိုင်းနှုန်းရှိသော ပြည်သူတွေဟာ လူနေမှု့ အဆင့်အတန်းများစွာ နိမ့်ကျပြီး၊ နေထိုင်နေရတုန်းပါပဲ။ ဒီအချက်က အာဖရိကရှိ နိုင်ငံတွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကလေးနှိုင်းယှဉ်လို့ရနေပါတယ်။ လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော်မှာ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ နေနေကြတုန်းဖြစ်ပြီး၊ အများစုက အခြေခံကျသော လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သည့် သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ကျမ္မာရေးစောင့်ရှောက်မှု (သို့မဟုတ်) အခြေခံပညာသင်ကြားနိုင်မှုများ မရှိကြပါဘူး။
မြို့ပြအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလာသည့် ရာခိုင်နှုန်းကို ကြည့်လိုက်ပြန်လျင် သက္ကရာဇ် (၂၀၁၀) မှ (၂၀၃၀) အတွင်းကို တွက်ဆကြည့် ပါက နှစ်စဉ် (၁) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ တိုးတက်နေတယ်။ ဒီနှုန်းဖြင့် ဆက်သွားပါက တရုပ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း အနည်းဆုံး (၃) ခုလောက်ကြာသည့်အခါမှ့ နိုင်ငံ၏ လူဦးရေး၏ (၄)ပုံ ပုံလျင် (၁)လောက်ကိုပဲ အကျိုးသက်ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို လူနေမှုရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျမှုတွေက နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို များစွာ သက်ရောက်စေပါတယ်။ အကြောင်းက ပြည်တွင်းစားသုံးမှုနှုန်းက သိပ်ကို ကျဆင်းနေသောကြောင် ပြည်ပသို့ ကုန်များတင်ပို့နိုင်ရေးကိုသာ အားထားပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေရတယ်။ ပြည်ပသို့ တင်ပို့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်မှာသာ မှီခိုနေရသော အချက်က တရုပ်နိုင်ငံအတွက် အဓိကအချက်တရပ်ဖြစ်၍ လာတယ်။
အခြေခံအားဖြင့် တရုပ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဟာ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် စီးပွားရေးဖြစ်နေသောကြောင့် တရုပ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်ပသို့ ကုန်တင်ပို့ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးကို ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်ထဲသို့ တိုးဝင်လာတော့တယ်။ ထို့ကြောင့် တရုပ်နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကို မှီခိုအားထားနေရတယ်။
အဆမတန်များပြားနေသော အနောက်နိုင်ငံတွေမှ စားသုံးသူများအပေါ်မှာ များစွာ မှီခိုလာရပြီး၊ အဓိကစားသုံးသူတွေကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တချက်က တရုပ်၏ ထွက်ကုန်တွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ရေကြောင်းကို အသုံးပြုနေရတယ်။ ဒီကမ္ဘာ့ရေကြောင်းကို အမေရိကန်ရေတပ်က လွှမ်းမိုးထားတယ်။ ဒီအချက်က တရုပ်နိုင်ငံအတွက် စိန်ခေါ်မှု့တရပ်အဖြစ် ရှိလို့နေဒါပေါ့။ အကြောင်းက အမေရိကန်အနေဖြင့် ကမ္ဘာရေးကြောင်းကို ပိတ်စို့ချင်လျင် ပိတ်စို့လို့ရနေတဲ့အချက်က တရုပ်နိုင်ငံအတွက် စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေရတယ်။
အကယ်၍များ တရုပ်က ယူဆထားသလို အမေရိကန်အနေဖြင့် သူတို့ကို ရေကြောင်းပိတ်စို့မှုတွေ လုပ်လာလျင်တော့၊ တရုပ်အတွက် အကြီးမားသော အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်လာရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တရုပ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ခေတ်မှီသော ရေတပ်အင်အားကို တည်ဆောက်ပြီး၊ မိမိ၏ ကုန်သွယ်ရေးအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်လာတယ်။
တကယ်လို့ တရုပ်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရေတပ်ကို ခေတ်မှီတိုးတက်အောင်လုပ်ရလျင်၊ စစ်သင်္ဘောတွေရယ်၊ ၎င်းစစ်သင်္ဘောတွေအတွက် ဆိပ်ကမ်းနေရာများရယ်၊ မစ်ဆိုင်းလက်နက်တွေရယ် စသည်များကို လိုအပ်လာပါမယ်။ အဲဒီရေတပ်မျိုးကို တည်ဆောက်ဖို့ဆိုဒါဟာ တရုပ်နိုင်ငံအတွက် နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ့ အမေရိကန်ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ကဲ... စီးပွားရေးနဲ့ ရေတပ်တည်ဆောက်ရေးတို့ကို ခဏဘေးဖယ်ထားကြည့်ပါစို့။
တရုပ်နိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ပထ၀ီအနေအထားကို ကြည့်လျင် တရုပ်နိုင်ငံဟာ သဘာဝ တောတောင်တွေက နိုင်ငံကို ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံ၏ မြေပုံကိုကြည့်လိုက်လျင် ဂိုဘီသဲကန္တာရကို ထင်ရှားစွာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တိဖက်ကုန်ပြင်မြင့်ရယ်၊ ဟိမန္တာတောင်ကြောတွေနဲ့ ဗမာ ယူနန်သစ်တောအုပ်များကိုပါ တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်တယ်။ တိဖက်ကုန်မြေမြင့်နဲ့ ဂိုဘီသဲကန္တာရအကြားရှိ ပိုးလမ်းမဟာ တရုပ်နိုင်ငံကနေပြီး ကာကစ္စတန်နိုင်ငံဖက်မှတဆင့် ဥပရောပအထိ ခရီးပေါက်နေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဗီယက်နမ်နယ်စပ်နားတ၀ိုက်နဲ့ ဗမာ ယူနန်လမ်း( တရုတ်မြန်မာလမ်းမ)က နောက်ထပ်လမ်းတပေါက်ရှိနေတယ်။ အဲဒီလို သဘာဝတောတောင်တွေက နိုင်ငံ၏ နေရာဒေသများစွာကို ကာကွယ်ပြုပေးထားတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ သဘာဝတောတောင် ကန္တာရများနဲ့ ထွက်ပေါက်လမ်းများပြပုံ
ဒါပေမယ့် တကယ့် အပေါက်က မန်းချူးရီးယားက လမ်းပေါက်ဖြစ်တယ်။ မွန်ဂိုလီယားနဲ့ ရုရှားတို့ဖြင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသောနေရာဖြစ်တယ်။ (၁၃) ရာစုနှစ်လောက်က ဒီလမ်းပေါက်ကနေပြီး ဂျင်းဂျစ်ခန်း၏ မွန်ဂိုတပ်တွေဟာ တရုပ်ပြည်ကို အောင်မြင်စွာ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ဒါကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အချိန်မှာလည်း ဂျပန်တွေက အဲဒီလမ်းပေါက်ကိုပဲ အသုံးပြုပြီး၊ တရုပ်ပြည်ကို ကျူးကျော်လာခဲ့ပြန်တယ်။ တရုပ်တွေအတွက် ပြည်ပက ဘယ်လို ကျူးကျော်မှုမျိုးမဆို လာလျင် ဒီလမ်းပေါက်ကိုပဲ အဓိက အသုံးပြုပြီးတော့၊ ကျူးကျော်လာခဲ့ဒါကို သမိုင်းစဉ်တလျောက်မှာ တွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။
လူဦးရေက သိပ်ကို ထူထပ်များပြားနေသောကြောင့် တရုပ်ပြည်ကို ကျူးကျော်ဖို့ကလည်း ခက်ခဲပါတယ်။ ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်ထားဖို့ ဆိုရင်တော့ ပို၍တောင် ခက်ခဲနေတယ်။ ပထ၀ီအနေအထားက တရုပ်ပြည်ဟာ နေရာဒေသ၏ အလယ်ဗဟိုမှာ တည်ရှိနေတယ်။
လူဦးရေဘီလီယံလောက်ရှိနေသော ဟန်လူမျိုးတရုပ်တွေဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဒေသများမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဝေးလံပြီး ခက်ခဲစွာ သွားလာရသော ဒေသများတွင် ဥဂရက်မူဆလင်၊ မွန်ဂိုနဲ့ တိဘက်တန်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြပါတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံဟာ လူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဆိုဒါကို နားလည်ထားရပါမယ်။
တရုပ်နိုင်ငံကို အနောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့ပိုင်းရယ်လို့ ခွဲခြားကြည့်ပါက အနောက်ဘက်မှာ ဥဂရက်မူဆလင်တွေ၊ တိဖက်တွေက အနောက်တောင်နဲ့ မွန်ဂိုတွေက အနောက်မြောက်မှာ ရှိနေပြီး၊ အရှေ့ဘက်မှာလည်း ခွဲထွက်လိုသူ လူနည်းစုတို့ ရှိနေကြတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံ၏ သမိုင်းစဉ်တလျှောက်လုံးမှာ အရှေ့ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက် နယ်မြေတွေကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရေးအတွက် အမြဲတမ်း ကြိုးပမ်းအားထုတ် ရုန်းကန်နေရတယ်။ ဒီအချက်က အနာဂတ်ကာလမှာ ဆက်လက်ပြီး ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ထိုသို့သော အချက်တွေကြောင့် တရုပ်ခေါင်းဆောင်တွေက ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြဒါပါ။ နိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက် နှစ်ဘက်စလုံးကို ချိန်ခွင်လျှာမျှအောင် လုပ်ထားနိုင်ရန်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးအရှေ့ဘက်ကို ဆက်လက်၍ ထိန်းချုပ်ထားနိ်ုင်ရေးအတွက် ငွေတန်ဖိုးဘီလီယံပေါင်းများစွာကို စီးပွားရေးမှာ ရင်းနှီးမြုပ်ထားရပြီး၊ နိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ဖြစ်နေတယ်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာ နိုင်ငံ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့အခြားလိုအပ်ချက်များ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး တို့ဖြစ်ပြီး၊ အကြီးမားဆုံးတခြားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံ့ထားမှုတွေက စစ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအင်အားများတွေမှာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါမှ ၎င်းတို့၏ ပိုင်နက်နယ်မြေတွေကို ဆက်လက်တည်မြဲအောင် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပြီး၊ ဒီကိစ္စက တရုပ်စီးပွားရေးကို ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေစေ ပါတယ်။
ပြည်တွင်းရေးရာကိစ္စတွေပြီးတော့၊ တခြားကိစ္စကို ဆက်ကြည့်ကြစို့။
အမေရိကန်နဲ့မတူညီဒါက တရုပ်ဟာ ပြင်ပက ဖိအားများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဂျပန်၊ ရုရှားနဲ့ အိန္ဒိယတို့လို အင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ရယ်။ ထိုနိုင်ငံများသာမက တိုင်ဝမ်၊ တောင်ကိုရီယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်တို့လို နိုင်ငံငယ်တွေနဲ့ရယ်၊ ထိုအပြင့် ဗီယက်နမ်တောင်ပါ လိုက်သေးတယ်။ ထိုသို့ရင်ဆိုင်နေခြင်းဖြင့် တရုပ်ဟာ မိမိပိုင်နက်မြေတွေတည်တံ့ရေးအတွက် စစ်ရေး၊ စီးပွားရေးတို့ဖြင့် အသုံးချနေရတယ်။ ဒါတွေဟာ တရုပ်၏ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်။
အဲဒါတွေကြောင့် တရုပ်ဟာ နောင်တက်လာမည့် မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတခု မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး။ ဒေသဆိုင်ရာအတွင်းမှာသာ အင်အားတခုအနေဖြင့် ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အမေရိကန်အနေဖြင့် ဒေသတွင်း တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်သော အခွင့်အရေးများ ရှိနေပြီး၊ တရုပ်၏ သြဇာကြီးမားမလာနိုင်ရေးကို ထိန်းချုပ်ထားနေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။
တရုပ်အနေဖြင့် ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံ တခုအနေဖြင့်ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပြီး။ တခြား ကုန်သွယ်ရေး အင်အားကြီးသော နိုင်ငံတွေလို ဖြစ် လာပါမယ်။ စစ်ရေးနဲ့ စက်မှုကုန်သွယ်ရေးတွေဟာ အမြဲတမ်းလျော့နည်းနေမှာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံ၏ အရှေ့မှာ ညီမျှမှုတွေရှိနိုင်ပေမယ့်၊ အနောက်ဖက်မှာတော့ မညီမျှမှုတွေ ဆက်ဖြစ်နေမှာပါ။ အနာဂတ်မှာ တရုပ်အနေဖြင့် မိမိပိုင်နက်နယ်မြေတွေကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ် ထားနိုင်ရန်အလို့ဌာ စစ်ရေးကို အကြီးအမာဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ် အရှေ့ကို တက်ဖို့ လုပ်လိုက်တိုင်းမှာ အနောက်ကို ပြန်ပြန်ကြည့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာပြန်သူ၏ အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်။။။။ တရုပ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်ပြီး၊ ပြည်ပပို့သို့တင်ပို့သော စီးပွားရေးဖြစ်နေ၍ တရုပ်နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်၊ ဓါတ်ငွေနဲ့ လောင်စားဆီ လိုအပ်ချက်များ ကြီးထွားလာသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်ချောင်း အင်းအိုင်၊တောတောင် ကမ်းခြေ ပင်လယ်တွေက သံယံဇာတများအားလုံးကို တရုပ်အစိုးရပိုင်ကုပဏီတွေက ယခင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေး သမားတွေနဲ့ စီးပွားရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး၊ သွယ်ဆောင်နေကြသည်ကို မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်စီးပွားရေး ကုပဏီတွေ ဒီလိုမလုပ်နိုင်အောင် တားဆီးရန်အလို့ဌာ၊ နိုင်ငံ၏အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိနေတယ်။ ပြည်သူလူထု၏ နိုးကြားမှုက အစိုးရကို ဖိအားပေးသလိုဖြစ်နေ၍ အရေးကြီးပါတယ်။ တရုပ်၏ စီးပွားရေးကြီးထွားမှုသည် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အနုတ်လက္ခ္စဏာဖြစ်ပေါ်စေသည်ကို သက်သေအဖြစ် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆယ်တည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေလိုမျိုးက သက်သေထူနေပါတယ်။ ဧရာဝတီအပါအ၀င် မြန်မာ့ သံယံဇာတများနဲ့တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံသူ မြန်မာနိုင်သား အားလုံး၏ မွေးရာပါ တာဝန်တရပ်ဖြစ်တယ်။
မှတ်ချက်။ အဲဒီစာတမ်းသည် သုတေသနပြုအဇာဘိုင်ဂျန်ကျောင်းသားလူငယ်တစ်စု၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်များကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပြီး၊ ရုပ်ပြပုံများကို ကျွန်တော် ဖန်တီးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီဘာသာပြန်စာကို ဖတ်ရှုသည်အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
at 4/14/2012 07:55:00 AM
Yahte tup Laiza Ginjaw Ginra na Manau Shadung hta Baren sumla bang da ai hte seng nna, garu lai wa sai hpe 13.4.2012,5:00AM hta Nawku Hpung shagu na Hpung woi ni hte Hpungtau ni, mara raw kyu hpyi ai; daini du hkra majan gasat garum nga ai KKachyeju shakawn ai hte, Baren sumla kaw lata jawm mara nhtawm, langai hpang langai Madu Yesuamying ningsang hte akyu hpyi majai kau sai majaw anhte Wunli rawt jat wa na saga ai lam kabu gara "Ginjaw Salum" ngu, labau shang Ga shagawp gawp dat sai yaw. Majan shiga grai kahtet ai rai tim, anhte dang nga ai lam kyu hpyi mahtai grai lu nga ai. Aja awa kyu matut hpyi nga ga yaw. Bus jawn let raitim, hkarang leng jawn let rai tim......
JIC++++REad More+++click full
Mrs Bawk Ja ( part - 1 ) video
at 4/13/2012 10:06:00 AM
Salang Jan Bawk Ja hte San Htai.
China-Backed Hydro Dam Upsets Burma Localsm (video )
at 4/13/2012 09:47:00 AM
In September, Burma's reform-minded President Thein Sein appeared to heed environmental concerns and suspended construction ofacontroversial China-backed hydropower dam in northern Kachin state. But the Myitsone dam project has not been cancelled and locals worry what will happen if construction r...
at 4/13/2012 09:34:00 AM
Hkawp myitrum manang ni, daini gaw,"Majan " Ga shagawp hpe Myen hku ka shagawp dat sai yaw. Shani shagu majan gasat ai shiga ni na lu nga ai. Grai tsang ra ai shiga ni mung ding-yang na ai. Tai ni n-gun jat hkrai jat nga ai lam ni n shayawm ai sha na lu ai. Dai hte maren akyu hpyi ai lam mung n shayawm ga ai, grau pyi naw kyu hpyi madang shatsaw nga ga ai. Anhteamatu mara raw akyu hpyi na hta mara yin la nna, galai shai na she KK grau ra sharawng nga ai lam mung grau chye na shajang saga ai re.Shanglawt Tsing ni Ga shagawp lu shapoi nga dingsa, Ginjaw n tat na re yaw. Yawng hpe kyu hpyi dum nga na re kam let,
Refugees hope for ceasefire in Myanmar
at 4/12/2012 12:06:00 PM
Refugees hope for ceasefire in Myanmar by reuters
Refugees at this camp in northern Myanmar are hopeful about the future.
About 60,000 people in Kachin state have been forced from their homes due to fighting between Kachin rebels and government forces in recent months.
Tsuna mi Malaysia kaw du (video ) click
at 4/12/2012 12:03:00 PM
at 4/12/2012 12:00:00 PM
Matu nding ai myen ni
ပည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၁)
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၂)
DUNG (14) NI HPYEN JAKLI GAP SHALUP KAU
at 4/12/2012 11:39:00 AM
April (11) bat Masum
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (2) up hkang ginra maga de စစ်ကိုင်းတိုင်း maga na Danai Hka, hka nam hku lung wa ai myen hpyen niaJakli (1) hpe Masat (2) Dap Ba Dung (14) na Du Laru La Awng woi awn ai Hpyen Hpung ni gap lup kau lu ai lam chye lu ai. April (10) ya shana maga hkying (5:00pm) ten ram hta Hkanti kawn lung wa tai hpyen marai (4) hpe Jakli hte hpawn hka kaw gap bang kau lu ai lam chye lu ai. April (7) ya shani mung Hkanti kawn Taik Ti de lung wa ai Dagung Se Danai hka lahta kaw lusha hte machyu pala htaw lung wa ai Hka.M.Ya (229) Dap ni Jak Li Gup nna Hpyen Du (1), Hpyen La (1), sinat lau (1), sinat kadun (1) hte malu masha ni hka kaw lup bang mat ai lam chye lu ai. Ya ten Masat (2) Dap Ba hpe gasat na matu စစ်ကိုင်းတိုင်း na Myen hpyen ni htu lung wa ai hpe na chye lu ai.
at 4/12/2012 10:18:00 AM
Hkawp myitrum manang ni,
Daini, "Majan" ngu ai Ga shagawp gawp shagun dat sai yaw. Shara shagu majan gasat an nga ai lapran e, David Cameron sa wa na nga jang, Bawngban hpawng bai gan galaw dan mayu wa masai da. Muya maya kawlakai myit hkrai hkrai, n ju dik hpa re. Majan gaw loi pa n shayawm. AnhteaShare Ninghkring niamatu kyu grai hpyi shaja ra ai. Tai ni anhte marai hkum n law ai re chye majaw,grai she gwi si nga ma ai. Raitim, myawk4lang sha naw gap bun yang, Hpyen jaubu ni she gari mat masai......da. Shanhte gaw Sen hku she gap masai re.
at 4/11/2012 07:00:00 PM
2012 U.S.A Kachin Christian Family Camp
at 4/11/2012 09:38:00 AM
2012 U.S.A Kachin Christian Family Camp (May 25-28, 2012)
Camp Moses Merrill, OMAHA, NEBRASKA
read more++++click on full+++
Kachin Rebels Take on the Burmese Government
at 4/11/2012 08:53:00 AM
Kachin Rebels Take on the Burmese Government by NewsLook Forayear now, civil war has raged between the Burmese goverment and ethnic Kachin rebels. After rebel forces launchedageneral draft, hundreds of men and women enrolled for the frontline. The conflict has displaced thousands who now live in makeshift camps and with elections looming ahead, the government's offensive has stepped up. Our correspondents Cyril Payen and Pierre Vaireaux visitamilitary training camp deep in Kachin State's jungle. Powered by NewsLook.com Producer : France24
Chinese projects in Myanmar raising concerns(video)
at 4/11/2012 08:40:00 AM
Chinese led energy projects in conflict ridden and militarized areas of Myanmar are raising concerns amongst activists and researchers.
Chinese projects in Myanmar raising concerns by presstv
Mu Hta Ai Notebook 1,2
at 4/11/2012 06:57:00 AM
Daini, "Mu Hta Ai Note Book (2)" hpe bai ka shagun dat ai yaw. Tai ni hkajaw poi ngut jang (15-16) ya lapran Laiza hpe nbungli hte bom wa jahkrat na, sumtsan myawk kaba gap bun na ngu nna, Mikhtila kaw grai shaman shakyang nga ma ai.....da. Dai zawn nga ai shiga na magang, anhte Laizaeakyu hpyi arang rawt magang sha re. Hkrit myit mung n rawng mat saga ai ..oi. Pyaw ai she na mat sai. Tai niashiga kahtet n na yang pyi ra ra lagawn lagawn she nga mat mat re ai rai sa. Si tim prawn tim KKalata hta she rai na re majaw, myit dik ai. Kyu hpyi dum nga na kam ai yaw.
JIC: READ( more+++1) and( 2+++)
at 4/10/2012 11:34:00 AM
What Really Explains Thein Sein Regime’s Current Pursuit of ‘Ceasefire’ with the Karens while Killing the Kachins BY TRANSCEND MEMBERS by Maung Zarni – TRANSCEND Media Service What is motivating Naypyidaw regime to establish ceasefire with the Karen National Union while waging wars against the Kachin Independence Organization – rather thanacomprehensive national and ethnic reconciliation with – is the most crucial question that needs to be raised? Here isashort list of factors that are at work, according to my friends and colleagues who are on the ground: 1). local commercial interests organically tied to orapart of the regime (cronies and generals’ and ex-generals’ families) want to secure lion’s share of the spoils during the initial phase of free-marketising the country when there is no effective international competition as yet – because big time Western investors are not yet putting the money on the table for fear of huge initial risks in Burma. No one powerful enough from the powerful Ministry of Defense or the omnipotent National Defense and Security Council is involved in any of the ceasefire – only ministers from the line-ministries which are poised to gain commercial shares/interests (such as railway, electricity, energy, etc) if effective ceasefire holds. Here are some hidden facts: the Thai commercial interests, starting with Thaksin’s Foreign Minister Suriakat (spelling?) have been known to takeakeen interest in building an Asia rail link (from Thailand to India through Burma’s Karen-controlled areas). The Tavoy or Dawei Special Economic Zone projects – considered one of the world’s largest construction projects – involving the Italian-Thai Company – is in part located in the Karen-controlled strip of Tenasserim coastal region. No wonder then that the financial underwriters of all the ceasefire talks are Burmese businessmen. Of course, local Capital never acts alone. Some German foundations which serve as the front groups for German business interests have been active behind the scenes. Don’t forget West German companies have, both historically and contemporaneously, had no morals, qualms, or principles about supplying arms and dual-use technical hardware, setting up arms factories, mining, oil exploration, etc. during the half-century of Burma’s dictatorial regimes, starting with Ne Win’s Neanderthal regime in 1962 to Than Shwe’s monk-slaughtering SPDC. The Germans haveahead start as they have identified, teamed up and supported Free Market-minded local commercial interests such as Myanmar Egress. The German interests may behave rather crass and crude. Tory or Labor, the British, the largest “donor”, are not so far behind their EU rivals either; they have createdanetwork of several dozen strategically placed local proxies usinga3-months program called “Chevening Fellowship” who will do Britain’s bidding in the former colony. Former British Ambassador Vicky Bowman in Rangoon is now 2nd in command of External Affairs (international lobby and public relations) at Rio Tinto, the world’s 3rd largest and notorious mining company where the Brits are majority shareholders. The Burmese have an expression for things similar to “development and other types of foreign aid from the West (or the East)”: you throw crumbs when chunks are to be gained by doing so (Htaung Myin Yar Swant). “Development” in Burma is in effect what Marx called “primitive accumulation” -http://www.youtube.com/watch?v=0vTS9T81b0o 2). So, the regime offers ceasefire and talk of “codes of conduct” of its troops and the Karen National Liberation Army (KNLA) to be followed by “development”. Note “development” is THE CODE word for the commercialization of expendable agricultural land (among other things) most of which, according toarecent survey by the UN’s Food and Agricultural Organization, are located in non-Bama ethnic regions as the Delta and the Dry Zone, the historically profitable agri-land, have far less expendable commercially exploitable land; 3). the regime’s typical “divide and conquer” strategy which makes them pursue peace (e.g., KNU) with one group while attempting to decimate another (for instance, the KIA/KIO). The regime is ‘managing’ ethnic conflicts, for strategic and tactical reasons. The resolution of Burma’s armed ethnic conflicts does in fact requireacomprehensive nation-wide truth and reconciliation plan. At the moment, despite the right-sounding noises coming from Naypyidaw and its circle of advisers aboutapeace conference in Burma this is not the idea that will likely be turned intoareality by the ex-generals and generals. (Remember how the regime misled and manipulated the international media by claiming to have resolved the 6-decades of ethnic armed conflict with the world’s oldest revolutionary group, namely the Karen National Union, while it was onlyatentative ceasefire? Even the New York Times felt compelled to later publishaseparate article which refuted the regime’s claim of having ended this longest war in Burma). 4). ceasefire withoutapolitical settlement is profitable in the short and medium terms for those with huge commercial stakes in the region; but genuine peace and reconciliation require sharing power (and control of resources, revenues and labor/population) among parties in conflict. Obviously, the Burmese generals and ex-generals have outsourced the business of “strategic peace” to its commercial elements – Burmese commercial interests. Investors from Norway, Germany, etc. are licking their lips while the locals do the foreplay with the ethnic virgin lands (and untapped resources). _______________________ Dr. Maung Zarni is member of the TRANSCEND Network for Peace, Development and Environment, founder and director of the Free Burma Coalition (1995-2004), andavisiting fellow (2011-13) at the Civil Society and Human Security Research Unit, Department of International Development, London School of Economics. His forthcoming book on Burma will be published by Yale University Press. Read More+++link++++
at 4/10/2012 11:19:00 AM
Date: April 10, 2012 With international donors preparing to significantly increase humanitarian and development assistance in order to promote peace in Burma, we are very concerned that cross-border aid to marginalized and vulnerable populations is being limited or cut at this crucial time. Even while the cease-fire process is being carried out with separate ethnic armed groups, fighting is still taking place with the Kachin Independence Organization (KIO), resulting in fresh displacement of tens of thousands of people internally and outside the country. Even though some level of agreement has been reached with some ethnic armed groups, human rights violations are continuing in all ethnic areas under the new Army-backed government of U Thein Sein, including land confiscation, forced relocation, forced labour, extortion, and restriction of movement, rape and intimidation. The aim of the government is clearly to establish cease-fire agreements with the ethnic groups to promote development first, rather than to promote peace in the country. Numerous mega-development projects being planned or implemented, mostly in the energy sector, are leading to human rights abuses against local villagers, particularly ethnic communities. These projects have been started without standards to prevent harmful environmental and social impacts, and will therefore cause more refugee and IDPs. 36 Community Based Organizations (CBOs) from Burma gathered at the Thai-Burma border on April 6-7 2012, to discuss these issues, and have come out with the following policy recommendations; Humanitarian and development aid should be promoting peace, justice and reconciliation rather than dividing people and creating conflict. Humanitarian and development aid must not be linked to the construction of special economic zones and business ventures, and must not be used to put pressure on refugees or IDPs to return home involuntarily or to provide labor for projects. In future, any humanitarian and development aid process that intends to promote peace must be transparent and include all CBOs from all sectors in overall strategy planning, to ensure that peace is promoted amongst all sectors. Donors should ensure that they “Do No Harm” and should not cut humanitarian support to ethnic communities in order to pressure ethnic groups during ceasefire processes. Donors should continue to give urgently needed cross-border humanitarian aid in conflict affected areas. Development aid should prioritize human development and grass-roots empowerment rather than infrastructure development. Large-scale development projects should not be implemented in areas of Burma where conflict remains unresolved, as this will simply fuel further conflict. Sanctions must not be lifted until genuine peace, based on political solutions, is established in Burma. International Financial Institutes (IFIs) must be transparent, accountable and include all political stakeholders, CBOs from all sectors and local affected communities in any decision-making process for any kind of investment in mega development projects in Burma. CBOs must be allowed to operate freely and without restriction in their respective communities. Endorsing Organizations Ethnic Community Development Forum (ECDF) Forum for Community Organization-Burma (FCO-B) Burma Rivers Network (BRN) Backpack Health Worker Team (BPHWT) Burma Medical Association (BMA) National Health and Education Committee (NHEC) All Arakan Students and Youth Congress (AASYC) Chin Human Rights Organization (CHRO) Committee for Internally Displaced Karen People (CIDKP) Kachin Development Network Group (KDNG) Kachin Women’s Association Thailand (KWAT) Karen Environmental and Social Action Network (KESAN) Karen Health Department and Welfare (KHDW) Karen Human Rights Group (KHRG) Karen Office of Relief and Development (KORD) Karen Women Organization (KWO) Karenni Education Department (KnED) Karenni Mobile Medical Team (KMMT) Karenni Social Welfare and Development Centre (KSWDC) Karenni Women Organization (KNWO) Karenni Youth Organization (KnYO) Lahu National Development Organization (LNDO) Mon Relief and Development Committee (MRDC) Mae Tao Clinic (MTC) Mon Youth Progressive Organization (MYPO) Network for Environmental and Economic Development (NEED-Burma) Network for Chin Community Development (NCCD) Pa-Oh Youth Organization (PYO) Shan Education Committee (SEC) Shan Health Committee (SHC) Shan Relief and Development Committee (SRDC) Shan Sapawa Environmental Organization (Sapawa) Shan Women’s Action Network (SWAN) Shan Youth Power (SYP) Ta’ang Students and Youth Organization (TSYO) Tin Tad Clinic (TTC-Shan) Contacts: Sai Khur Hseng: 0816722031, For international call: +66816722031 email address: unitedecdf@gmail.com Seng Mai: 0823913325
Hpunau KNU ni MoRo ni hte matut ai shiga
at 4/10/2012 10:09:00 AM
February 4, 2012 –Peace Negotiators of the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and leaders of the Karen National Union of Myanmar met yesterday at the Office of the Institute of Bangsamoro Studies (IBS) in Cotabato City.
The meeting that started at passed 8 am and lasted at 11, then followed by lunch and after which the MILF leaders went foraFriday congregational prayer was very cordial andaspectacle to remember of real revolutionaries and interlocutors who just met but as if had been comrades for years bonded by noble goals for peace and justice in their respective domain.
Greeted by warm welcome and embrace of smiles and camaraderie, the KNU leaders felt very much at home. Then Mohagher Iqbal, the MILF Chief Peace Negotiator, conveyed the wishes of success and best regards of the MILF leadership under Chairman Al Haj Murad Ebrahim and the Bangsamoro people for the KNU and the government as they will soon embark onapeace process that aims to resolve one of the world’s longest running conflict.++++Click More+++
Myit ja ai mali zup
at 4/07/2012 12:37:00 PM
laiwa sai march 30 ya shani e,anhte myu sha tingasalum kaba rai nga ai ,mali zup kawe,(aung myin tar) mare kaw na (PYA DAR) MARAI MALI gaw dai mali zup kaw GAT DUT ai mare masha ni hpe lawan htawt na matu ndai hku shagyeng hkap tsun ma ai.
pya: nanhte ndai kaw na ya jang le mu .
maremasha: anhte nlu le ai ndai sha ra gaw anhteadut lu dat sha ai sha ra , anhteakanbau bungli galaw ai shara re. anhteakashu kasha niahpaji lamamatu ndai kaweanhte gat dut let kanbau nga ai re.
pya: nahte nle yang gat seng pat kau ya na .
maremasha: nanhte wa anhteagat seng hpe pat kau ya ai rai yang anhte gara hku tam lu tam sha na .ya tenemare masha ni nkau mi gaw myen asuya wa kade shahkrit shama tim ,shanang let ,gwi gwi hte nga nga ma ai hpe mu lu ai.
Shi Hkrung Rawt Sai
at 4/07/2012 12:36:00 PM
Hpawtni gaw, Kabu Gara Hkrung Rawt Nhtoi rai sai i.Grai kabu ai. Happy Easter! ngu, Shanglawt Tsing ni shawng tau shakram dat ai yaw. Yawng Kabu Gara Nawku Dawjau shang lu myit ga!daini na Gashagawp gaw, " Shi Hkrung Rawt Sai " re.
Ya hte Mungmasha4hpe chyahkrung htu lup ai Shiga n teng ai lam na chye lu sai. Myen ni rim da ai Mungmasha kaw na Ko Mhat Gyi ngu ai wa hprawng lawt mat wa ai shaloi, manang ni marai4hpe aga nhkun nteneshatsap da ai mu kau da ai majaw tak nna, " Htu lup kau sai"ngu hkrit tsang malu tsun hkrup ai she re nga ma ai. Marai 8 hpe woi mat wa ai lachyum gaw,Shanhteashim lam matu rai nhtawm, atsawm sha woi nga nna, numhtet ga ni tsun dat rai, apyaw sha bai wa shangun ai re da. Numhtet ga gaw, " Anhte mung n- gap na, nanhte mung hkum gap na da" ngu, KIA ni hpe wa tsun mu ngu ai re da. Numhtet ga tsun ai Sitchaungmhu wa gaw Kayin, Baptist re, kyu grai hpyi ai wa re da.
Bai, 5.4.2012 shani, Manmaw lam, Laimawk Yang kaw KIA6hpe Tai 300 daram wang da ai mung, dai shana na laru marang kabaelawt mat wa ma ai da. Kyuhpyi mahtai rai sai. Anhteashawnglam Share Ninghkring ni chyawm me, aga kaduk kata rawng ai nau na sai majaw, shan tsit kan tit re ai ana ni byin wa ma ai da. Yehowa jaw ai tsi lu shaja na matu hpaji jaw dat sai. Ginjaw hpe wan shawng nat kajawng nna, shang gasat yang she loi na re ngu nna, ginjang tam na Tai kaichyan ni shakut nga ma ai nga nna mung, tsun garu nga ma ai. Dai majaw, Ginjaw hte Shawnglamamatu Kyu grai hpyi nga ga yaw. Hpa n ra u ga.
Bai, Mali Zup hka madim galaw na bai zawzang nga ai shiga n teng ai nga nna, Mungkan de, ucsifjynfe,f&kH;? wm0ef&SdolwpfOD; ngu, tsun shabra masu nga ma ai re yaw. Zawzang taw nga ai gaw 100 % hpring teng nga ai sha re. Hpyen yen kau da ai kahtawng ningchyawng hkan, lawu ga na matsan mayan ni hpe lanep wa hta magawn sha shangun ai mung laksan ladat rai nga malu ai. Arung arai ni gumhpraw ni htawm wa ai lawu ga masha ni hpe lu rim nna, warning jaw dat ai mung kade lang she rai masai da. Lawu gaejan gri nna galaw lu galaw sha grai yak ai majaw asuyaenan daihku galaw shangun ai re nga ma ai.
Shadow over Burma’s democracy
at 4/07/2012 05:35:00 AM
Barring the unforeseen, the NLD will win the 2015 general elections byalandslide. As the nominal successor to the military regime that has ruled Burma for close to 50 years, the USDP cannot offer votersacompelling reason to choose it over the NLD. Will the military accept Aung San Suu Kyi as president?+++read more+++click
Munghpawm Democracy lamantsaehkrat bun magap tawn ai shingnyip shingna
1. April 1 ya shani galaw ai ra-lata gaw, NLD maga hku nna yu yu timung, USDP hku yu yu timung, rap ra ai hku n rai hkra rai tim, ram ram dingman ladat jaw ai hku ra-lata mai byin nga ai, ngu ai hpe madun sai, ngu mu lu ma ai.
2. Ya du hkra byin ai hpe sha yu yu, shawng lam hpe tak ai hku n re sha, tsun na nga yang, NLD gaw 2015 galaw na mungdan ra-lata hta tsep kawp pawt-di awng dang na re, ngu mu ai. Gumshem Than Shwe-hpyen atsuyaahpang galai shang ai atsuya USDP gaw, mung shawa hpe, "USDP hpe mahtang ra-lata sharawt marit, NLD hpe n re", ngu nna tsun na lam n nga ai. "Hpa majaw" ngu ai daw gaman rai nga ai.
3. Hpyen hpung mung ndai hku byin mai na re ngu nna tau nna mu tawn nga ai, dai majaw 2008 gawda tara shabyin wa ai ten hta hpyen hpung parliament kasa 25% rai ra ai, ngu ai ahkaw ahkang hpe gawda ai tara hta shalawm bang jahkrat tawn nga ai. Ndai gaw, hpyen hpunganingmu hte nhtan shai ai hku mungdan lama sharai la mat wa yang hpyen n-gun bai shang wa na matu ahkat galaw tawn ai lam re.
4. Myen hpyen hpungalabau dingyang hta, hpyen hpung chyu sha Munghpawm zang-ayai mat ai gam maka n byin wa hkra shingdang tawn na atsam nga ai, ngu kam hkrat wa nga ai. Dai ni mung shai wa ai lam n nga ai.
5. Dai ni "kahti kari" rai nna simsa lam shabyin wa lu ai hpe dam lada rap ra wa hkra USDP atsuya pawn ba bau maka lu na atsam n rawng yang, yak ai lam bai byin wa na re. Jet ai federal democracy sha grin nga lu ai uphkang masa mai shabyin ai. Raitim dai hpe shabyin na matu lam mahkrun hta 2008 gawda tara wa dingbai dingnai bai byin nga ai. Mungdan shawa shamu shamawt ai majaw federal uphkang hkrang sharawt la wa yang, hpyen masaa"baw bai dap " wa na re lam gaw, Munghpawmademocracy shabyin mahkrun hta magap tawn ya ai shingnyip shingna rai nga ai.
Hpyen hpung hku nna mungdan uphkang ahkaw ahkang hpe bai magra la wa ai rai yang, mungdan ting sum na re, awng dang ai lam ngu ai hpa mung n nga na re.
6. Canadian Foreign Minister John Baird gaw Munghpawmeshawng lamalagaw lahkam htawt ai hta, garum na jin jin re, nga April 1 ra-lata ngut ai ten hta tsun ai. Shi shading ai lam gaw, mungdan ting tara hkan ai lailen masa hte jet nna rap ra ai uphkang masa hpe yawng hkap la chye hkra, shabyin ra ai. Myit jasat machye machyang hta yawng, hpyen hpung mung lawm, dai tsang de du ra ai, ngu ai lam re. Ndai hpe shabyin na npawt hpang ya ai makan ni hta Canada gaw garum la lu ai atsam kaba lu nga ai, nga ai lam re.
Canadian tara-kasa Mitchell Wigdor, Munghpawm hte makau grup yin hkan law law lang sa du hkaja yu ai wa ndai hku mu lu ai.. Shi madun dan lachyum ginsi kru hpe shaw la nna Ginjaw de tang dat ai. Lachyum ginsi hpe shaw la nna lachyum shaleng ai hku ka lajang la ai hpe tang shawn dat nngai.
Tsaw ra hkungga let, SK
Sadung Jinghpaw Wunpawng Hpyenyen NiaKraw Madai ...
FBR REPORT: Burma Army Mortars Villages and Burns ...
ကချင်KIO နဲ့ မြန်မာအကြား လက်ရှိအခြေအနေ | ABC Radio...
Ndai shiga hte seng nna garu nga ai lam gaw Media ...
China-Backed Hydro Dam Upsets Burma Localsm (video...
Chinese projects in Myanmar raising concerns(video...
ဖောင်းဆိုင် မြန်မာအစိုးရလုံခြုံရေးဂိတ်ကို KIA မှ စ...
စတုတ္ထအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲ၌ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကိစ္စ UWSA...
Kachin activists in Australia protest against Burm...
Kachin Music Cocert & Culture Show!
[BurmaCampaign] Help Kachin Refugee Children From ...
Kachin plight reveals Burma's patchy progress ( BB...
Ga shagawp gaw, " Happy Birthday
Kachin plight reveals Burma's patchy progress
We nyi gasat poi de she rai wa sai.
ဂျပန်ရောက် ကချင်လူမျိုး များ သည် မြန်မာ အစိုးရ ကို...
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ မိုင်ဂျာယန် သ...
JAPAN DU MYU SHA NI N GUN MADUN
Awng lawt Dapba2e hkying hkum (24) LU SHA GAM AK...